နေရာတကျစီးပွားရှာပါခဗျာ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » နေရာတကျစီးပွားရှာပါခဗျာ
Posted by ရွှေဘိုသား on Jan 20, 2011 in News | 15 comments
လမ်းဘေးဈေးသည်တွေ ဆိုးတာတော့ နေရာတိုင်းပဲ..အရက်ဆိုင် ဆိုတော့ ပိုဆိုးတာပေါ့၊ လှည်းတန်းလမ်းမမှာလည်း ညနေ ၆ နာရီနောက်ပိုင်း လမ်းဘေးဆိုင်တွေခင်းကြတာ လမ်းလျှောက်စရာ နေရာ တောင် မရှိဘူး.. အကင်ဆိုင်တွေ ပိုဆိုး.. စားသောက်နေသူတွေ တော့မသိဘူး..လမ်းသွားလမ်းလာတွေကတော့ မီးခိုးငွေ့တွေ ရှူရင်း ကားတွေရှောင်ရတာ တဖက်၊ အကင်ဆိုင်မီးဖိုကြီးတွေနဲ့ မတော်တဆ ထိလိုက်ရင၊် မှောက်လျက်များ လဲသွားလိုက်ရင် ဆိုပြီး စိုးရိမ်ရတာတဖက် ……..သက်ဆိုင်ရာလူကြီးမင်းများကလည်း မျက်စိကို တမင်မှောက်ထားကြတယ် ထင်ပါတယ်…နေပြည်တော်ညဈေးလို စားသောက်တန်းဆိုပြီး နေရာသတ်သတ်မှတ်မှတ် လုပ်လိုက်ရင်ကောင်းမယ်………….
ဒါက စည်ပင်လို့ ခေါ်တဲ့အကောင်ကြီး၊အကောင်သေး တွေရဲ့ စကောလောက်မှစောက်မနက်ပဲ သူတို့ ပိုက်ဆံရဖို့အရေးလုပ်တဲ့လုပ်ကွက်တွေပါ။
စည်ပင်ကို ဒီအတိုင်းလွှတ်ထားရင် အားလုံး အရှုပ်အပွ မြို့ကြီးထဲနေနေရပါတော့မယ်။
စည်ပင်ကို ဘယ်သူမှ အရေးမယူနိုင်ဘူးလားဗျို့။ ဒီပေါ်တက်ဖတ်တဲ့ သက်ဆိုင်သူများ လုပ်ပေးကြပါဦး။ တစ်မြို့လုံးလည်း လမ်းပေါ်ဈေးသည်တွေရောင်းလို့ ကားပိတ်နေပါပြီ။
ဒါကတော့ တာမွေဘက်ရောက်လို့မြင်တာလေးပဲ ရှိပါသေးတယ်။ လက်ရှိ ဆူးလေလမ်းမနားနဲ့ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်း တွေ ညနေပိုင်းဆို လာရောက် ကြည့်ရှုရင် ဘယ်လိုဆိုတာ ပိုမြင်သွားပါလိမ့်မယ်။ ဖမ်းတဲ့သူတွေလည်း ပိုက်ဆံပေးတော့ မဖမ်းကြတော့တာလား မဆိုနိုင်ပါဘူး။ စည်းကမ်းသည် လူ့တန်ဖိုး ပျောက်ဆုံးနေသလို ခံစားမိပါတယ်။
အရင်က ပလက်ဖောင်းပေါ်ဈေးရောင်းလို့ မဆလခေတ်ကတောင် ဖမ်းလိုက်ရတာ။
အခုတော့ ကားလမ်းပေါ်တောင် ဈေးတက်ရောင်းနေပြီ။
ဘာမှမလုပ်ဘူး။ အောက်က ကောင်တွေ ပိုက်ဆံတောင်းပြီး လွှတ်ပေးနေတာကိုကြည့်နေတာပဲ။ မဖမ်းလေ ပိုဆိုးလေ။
ဖမ်းတယ် ဆိုရင် နောက်အလုပ်ပြောင်းလုပ်မယ်။ မဖမ်းရင် ဆက်လုပ်မယ်။
သတင်းစာလူထုအော်သံကနေထည်ယင်ကော..ဒါမှမဟုတ်BBC VOA ကနေအော်ယင်ကော တခုခုတော့လုပ်သင့်တယ်လို့ထင်တယ်…
ဒီလိုမျိုး အများသိအောင် ပြောတဲ့အခါ အများက အကုန်လုံးသိပါတယ်။ စည်ပင်က သိဖို့ လိုပါတယ်။ သိရအောင်လဲ လာဘ်ထိုးထားလို့ဒီလိုလုပ်ခွင့်ရှိနေတာ ကို လဲ သိနေပြန်တာပဲ။ ကဲ.. ဒါဆို ဘာလုပ်နိုင်သလဲ ?
၁။ စည်ပင် က အရေးယူမယ်လို့ ထင်လား ?? မထင်ရင် အကျိုးအကြောင်း အထောက်အထားနဲ့နေပြည်တော်ကို တိုင်စာပို့ ကြည့်။ လုပ်ကြည့်ပြီးမှ အရေးယူ မယူဆိုတာ သိနိုင်မယ်။
၂။ အရေးမယူဘူးလို့ ဆိုပါဆို့ ။ ဘာလုပ်နိုင်သေးလဲ။ အရက်သမားတွေကို အရက်မသောက်ဖို့ဆော်သြနိုင်သလား။ မထင်ပါဘူး။ ပုလင်းနဲ့ ကျွေးလိုက်လိမ့်မယ်။
၃။ အမျိုးသမီးတွေ ( Alcohol မနှစ်သက်တဲ့) အဲဒီလို ဆိုင်ရှေ့ က ဖြတ်မလျှောက်နဲ့ ။ လမ်းက ရွေးစရာမရှိရင်တော့ မပြောတတ်ဘူး။
၄။ လူငယ်အင်အားသုံးပြီး ဆိုင်တွေကို ဖြိုပြစ်လိုက်။ မထင်ဘူးနော်။ နောက်ဆက်တွဲ ပြသာနာ ရှင်းနိုင်လို့ လား။ တိတ်တဆိပ် လုပ်ရင်တော့ ရမှာပေါ့။ Stocking တွေ စွပ်ပြီး Base Ball ဒုတ်တွေနဲ့ကားတစ်စီးနဲ့ ။ အင်ဂျင်ပါဝါကောင်းကောင်း။ ပီးပေါ်ပီးပေါ်နဲ့ နောက်က လိုက်မဲ့ဟာတွေ မရှိပါဘူး။ အာတော့ မချောင်နဲ့ ပေါ့။ မြန်မာပြည်မှာ ပေါ်သမျှ အမှုတွေအားလုံးဟာ အာချောင်လို့ ပေါ်တာချဉ်းပဲ။
နောက်ပြီး ခင်ဗျား အရေးအသားမှာ မြန်မာ မိန်းကလေးချင်းထပ်နေတယ်။ ကျုပ်ကိုယ်တိုင် ဗမာ စစ်စစ် တစ်ယောက်ပဲ။ ဗမာမိန်းကလေးမှ မိန်းကလေးမဟုတ်ပါ။ ကုလားမ၊တရုပ်မ၊ရှမ်းမ၊ဘာမ ညာမ အားလုံးဟာ မြန်မာနိုင်ငံသူ မိန်းကလေးတွေပါ။ ခင်ဗျားရဲ့မြန်မာ မိန်းကလေးတွေဟာ လဖေ့ရည်ဆိုင်တောင် ကြာကြာထိုင်ရဲတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာဟာ အသားလွတ်ကိုယ့် ငါးချဉ် လုပ်နေတာပါ။ ဒီအတိုင်းဆို မြန်မာ မဟုတ်တဲ့ အခြားမိန်းကလေးတွေက …??? ခင်ဗျားသိထားရမှာက အခု ခေတ် မိန်းကလေးတွေရဲ့ ခံယူချက်နဲ့အတွေးအခေါ်က ခင်ဗျားနဲ့အပုံကြီး ကွာသွားပါပြီ။ သူတော်ကောင်းလိုလို ပုံစံနဲ့ငထွားက ၀င်ပြီးခါးနာ မနေပါနဲ့ ။ အရက်ဆိုင်မက လို့ ဘာဆိုင်ဖြစ်ဖြစ် မိမိအိမ် (သို့ ) မိမိ သွားလိုရင်းနေရာကိုသာ ဦးတည်သွားဖို့ ပဲ ခေါင်းထဲမှာ ရှိကြလို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကို လျစ်လျူရှုသင့် ရှုရတော့မဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့မြို့ ပြအိမ်ယာ တည်ထားမှုပုံစံရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့် နှုတ်(သို့ ) ကိုယ်ထိလက်ရောက် မကြူးလွန်ရင် ပြသာနာမရှိနိုင်ပါ။ ကျုပ် အရက်ဆိုင် ညတိုင်းထိုင်ပါတယ်။ ဆိုင်ရှေ့ က ညတိုင်း မိကောင်းဖခင်သားသမီးတွေ ဖြတ်လျှောက်ပါတယ်။ သူတို့ ခေါင်းထဲမှာ အရက်ဆိုင်နဲ့အရက်သမားတွေကို လစ်လျူရှုထားပါတယ်။ အရက်သမားတွေကလဲ တချို့ တလေ မျက်လုံးကစား အချင်းချင်းအာချောင်ရုံလောက်ကလွဲလို့လွန်ကြူးမှု မရှကြသလောက်ပါ။ ဆိုင်မှာ မိန်းကလေးများ အတော်များများ လာထိုင်ကျပါတယ်။ သူတို့ ဟာ ဖာတွေ မကောင်းတဲ့ဟာတွေမဟုတ်ပါ။ အလွာပေါင်းစုံက လူမျိုးပေါင်းစုံပါ။ ကုလားမတွေ(မွတ်စလင်)မတွေ့ ဘူးပါ။ တိုင်းရင်းသားတွေ သိပ်မတွေ့ ပါ။ တရုပ်မလို့ လဲ သတ်မှတ်လို့ မရပါ။ သေချာတာက သူတို့ ဟာ မိကောင်းဖခင် သားသမီးတွေပါ။ ဖာသည်များ အရက်ဆိုင်ထိုင်ဖို့အချိန်မရှိပါ။ ခင်ဗျားမှာ မိန်းမမရှိရင် အနည်းဆုံး တကြိမ်လောက် လိုက်စားဖူးရင် ဖာသည်တွေ အရက်ဆိုင်ထိုင်ဖို့အချိန်မရှိကြောင်းတွေ့ ရလိမ့်မယ်။ သူတို့Club နှင့် Hotel လွန်းပြန်ဆွဲနေတာကြောင့်ပါ။ အရက်ဆိုင်လာထိုင်တဲ့ အမျိုးကောင်းသမီးတွေဟာ အလုပ်အကြောင်းအရာတွေ၊ စီးပွားရေးနဲ့တခြားအကြောင်းအရာတွေကို ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ ဆိုင်ပေါင်းစုံ နေရာပေါင်းစုံ ထိုင်ခဲ့ဘူးပါတယ်။ ခင်ဗျားပြောတဲ့ မကောင်းတဲ့ မိန်းမဟာ ဂျိုမပါလို့မသိနိုင်ဘူးလို့ ပြောရင်တောင် အကဲခေတ်ကြည့်ရင် သိသာပါတယ်။
တာမွေမှာ ကုလားတွေ အများဆုံးနေကြတာ။ မြန်မာမိန်းကလေး မြန်မာမိန်းကလေးနဲ့ကျေဇူးပြုပြီး လူမျိုးရေး အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပေါ်လာစေနိုင်တဲ့ စကားလုံးမျိုးကို သတိထားပါဗျာ။
nigimi77 ရေ စိတ်လျှော့ စိတ်လျှော့ …
စည်ပင်တွေက ပေါင်းစားနေတာပါ …ဒါကြောင့် ဒီလို လမ်းဘေးဈေးဆိုင်တွေ စည်ကားလာတာ…ဒါကလည်း လမ်းသွားလမ်းလာဘက်ကကြည့်ရင်တော့ ဆိုင်တွေပိတ်နေရင် သွားရလာရမကောင်းဘူးပေါ့ … အမြန်သွားလာရမဲ့ အချိန်မျိုးဆိုရင် စိတ်ရှုပ်ရတာတော့အမှန်ပါပဲ … အပေါ်က ပြောခဲ့သလိုပဲ လှည်းတန်းက စိန်ဂေဟာရှေ့ကို ဖြတ်မယ်ဆိုလည်း အကင်ဆိုင်က လမ်းပေါ်ရောက်နေတာကြောင့် ဖြတ်သွားရတာ အဆင်မပြေတာတော့အမှန်ပါပဲ .. အနံ့သက်တွေကလည်း တူးခါးနေတဲ့အချိန်နဲ့ ကြုံရင် မလွဲမသွေ ဖြတ်ရတဲ့အခါ ဟန်မဆောင်နိုင်အောင်ပဲ နှာခေါင်းပိတ်ပြီးသွားရတာပေါ့..။ စည်ပင်ကလည်း သိသိကြီးနဲ့ လိုင်းကြေးပေးနေတော့ ရောင်းလို့ရနေတာပါ…။ ဘီယာဆိုင် ရှေ့က ဖြတ်လျှောက်ရတာ အရင်ကတော့ နည်းနည်း ရှိန်ဖူးတယ်.. အသက်ရွယ်ငယ်တုန်းကပါ .. အသက်ရွယ်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ဘယ်အရာက ရှက်ရ၊ကြောက်ရမယ့်အမှန်လည်းဆိုတာ သိလာတဲ့နောက်ပိုင်း ဘီယာဆိုင်ရှေ့လည်းဖြတ်ရမယ်ဆို ဖြတ်လျှောက်တာပါပဲ ။ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်သွားပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဂရုမစိုက်တတ်ရင်ပဲ တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်… ဘီယာဆိုင်ဆိုတာတော့ သိတဲ့အတိုင်းလေ … နေရာ၊ဒေသနဲ့ .. ဆိုင်အမျိုးစားကိုလိုက်ပြီး ဆိုင်မှာထိုင်တဲ့လူတွေ အာချောင်တာ မချောင်တာရယ်… ဖြတ်လျှောက်တဲ့လူရဲ့ ကိုယ်အမူရာ ၊ ၀တ်ဆင်ထားမှူ နှင့် မျက်စိမကလပ်တာတွေနဲ့လည်း ဆိုင်ပါတယ် ။
စာရေးသူပြောတဲ့ မြန်မာမိန်းကလေးဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံတွင်းနေထိုင်တဲ့ အမျိုးသမီးများကို ဆိုလိုပါတယ်လို့ နားလည်ထားပါတယ် ။ ဟိုးအရင် ခေတ်တွေတုန်းကသာ မိန်းမတွေက ရှက်သလိုလို ကြောက်သလိုလိုနဲ့ မသွားရဲမလာရဲ တာတွေရှိတာပါ.. ဒီခေတ်မှာ အဲ့ဒါမျိုးရှားသွားပြီလေ..။ ရှိတော့ရှိပါတယ် …၊၊ လ္ဘက်ရည်ဆိုင်လည်း တစ်ခါတစ်လေ ထိုင်တတ်တာပါပဲ .. ဘီယာဆိုင်လည်း အဖွဲလိုက်တစ်ခါတစ်လေ သွားတတ်ကြပါတယ်….. ။
မပေါ်တပေါ်တွေဝတ်ပြီး အနေထိုင်မတတ်ပဲ ဖြဲကားထိုင် …. မီနီစကတ်တိုတွေနဲ့ ဘတ်စ်ကားစီး… မြင်ရတာ တစ်ကယ်ကန့်လန့်ပါပဲ … စာရေးသူရဲ့ စေတနာကို နားလည်ပါတယ် ။ မိန်းကလေးတွေဘက်က စဉ်းစားပေးတာကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ သို့သော်လည်း မိန်းကလေးက ကိုယ်တိုင်စောင့်ထိန်းတတ်ပါမှ လုံခြုံမှာပါ။
လမ်းဘေး ဈေးသည် ဆိုတာ အခြေခံ လူတန်းစား လက်လုပ် လက်စား တနေ့ လုပ်မှ တနေ့ စားရတဲ့ လူတန်းစား တွေ ဖြစ်တဲ့ အတွက် သူတို့ကို ဈေးမရောင်းနဲ့ ဆိုပြီး တားမြစ်အောင် လုပ်ခိုင်းရင် သူတို့ ၀မ်းရေး ဘာနဲ့ ဖြေရှင်းမလဲ။ တခြား မလုပ်တတ်လို့ လုပ်တတ်လို့ အရင်းအနှီး နည်းနည်းနဲ့ ဖြစ်သလို လမ်းဘေးမှာ ပေကပ်ပြီး ဈေးရောင်းနေရတာလေ။ အရက်ဆိုင်ဆိုတာတော့ လမ်းမကြီးပေါ် ခင်းပြီး ထားတာမျိုး မဖြစ်သင့်ပါဘူး ဒါမျိုးကတော့ တားမြစ်သင့်ပါတယ်။
ဈေးသည် များများ ရှိတဲ့ နေရာက လူစည်ကားနေပါတယ်။ တခြားသော မြို့တွေမှာ ဆိုရင် နိုင်ငံခြားသားများ ညဘက် သွားလည်ပတ်နိုင်အောင် တမင်ကို ညဘက် ဈေးတန်း လုပ်ပေးထားတယ်။ ပြည်တွင်းက လူတွေ ညနေ ရုံးဆင်းချိန် ပါလာတဲ့ ပိုက်ဆံ လေးနဲ့ ၀ယ်စားဖို့ မျှော်ပြီး ရောင်းနေတဲ့ ဈေးသည်တွေပါ။ လမ်းမပေါ်မှာ ရှုပ်နေတယ် ခံစားမိပေမဲ့.. ဈေးသည်တွေ မရှိဘဲ ပြောင်ရှင်းနေတဲ့ မြို့တော်ကြီး ဖြစ်သွားရင် ဘယ်လိုနေမလဲ သရဲခြောက်သလို ဖြစ်သွားအုန်းမယ်။ စည်းကမ်း တမျိုးနဲ့ သတ်မှတ်မှုလုပ်သင့်တာပါ။
နေရာတစ်ကာ ဒီလိုချည့်ပဲ သံကုန်ဟစ်ပြိး ဈေးခေါ်သေးတယ်။ လက်ခုပ်တွေတီးလိုတီး ဟိုမရောက်ဒီမရောက် သံသေးသံကြောင်ဟစ် နေတဲ့ ပျံကျဈေးသည်တွေ နေပြည်တော်မှာလဲရှိတာပဲ ။ဖမ်းလည်း ခဏပဲ
ခုနစ်နှစ်လုံး ( ရှမ်းကိုးမီးမှာဆို ခွန်နှလုံးဆိုရင် ကိုယ်နိုင်လို့ ကတော့ နှစ်စရတယ် အလုံးတူ နှစ်စလေ)
( ၂။ အရေးမယူဘူးလို့ ဆိုပါဆို့ ။ ဘာလုပ်နိုင်သေးလဲ။ )
ယနေ့ ခေတ်က မကျေနပ်တာတွေကို ကဗျာဆန်ဆန် ရင်ဖွင့်နေတာတွေဘဲများတယ်
ကျွန်တော် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု သာလျှင်
မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးရဲ့ အုပ်စီး သမ္မတကြီးဖြစ်သင့်ပါတယ်
သူတို့ ဖြေ၇ှင်းပေးဘို့ ကိုမျှော်လင့်တာရယ်
ကိုယ့်ဘက်က လုပ်သင့်တာရယ်ကို ချိတ်ဆက်ကြည့်ဘို့ လိုမယ်ထင်တယ်
သူ့ ရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်ကို သူက ပြောလိုက်ပြီ
ဟုတ်ပါတယ် စည်ပင်တွေဘာဖြစ်တယ် ညာဖြစ်တယ် ဝမ်းချုပ်တာကိုဘဲ စွတ်အော်နေရမလား
ဘာညာပေါ့ နည်းနည်းပါးပါး ကျမ္မာရေးလေးလုပ်ကြပေါ့
ကျုပ်ကတော့ တစ်ခါလာလဲ မကျေနပ်တဲ့အကြောင်း
ဒိမကျေနပ်တာတွေကိုဘဲ အော်နေလို့ ပြီးမှာလား
ကိုnigimi77အခုလိုထောက်ပြတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောတဲ.မြန်မာမိန်းကလေးဆိုတာကလည်း eton ပြောသလိုပါပဲမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာနေတဲ.လူကိုပြောတာပါ။ကျွန်တော်လည်းသိပ်
ကျွန်တော်အခုမှစရေးဖူးတာပါအသက်လည်း 18 ကျော်ပဲရှိပါသေးတယ်။ပြောမှားတာရေးမှားတာရှိရင်
အချောင်နေရင်းထိုင်ရင်း.. ကိုအောင်ပုက .. ဆဲသွားသေး..။
@narziparty2009 အခုလို .. ရင်ဖွင့်တာလေးတွေ ဒီမှာရေးတင်စေလိုပါတယ်ဗျာ..။
စာရေးရင်.. တချို့ နိုင်ဂျံဂါးရောက်နေသူတွေက .. ဘယ်လိုမှပုံဖေါ်နားလည်လို့မရဘူးဖြစ်နေတတ်လို့ပါ..။
ထွက်လာတာ ..အနှစ် ၂၀-၃၀ သမားတွေလည်း ရှိတာကိုး..။
မနေ့က .. တီဗီမှာ သတင်းတခုလာတယ်..။
ရှော့ပင်းမောထဲ လမ်းလျှောက်ရင်း ဆဲလ်ဖုံးနဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျပို့ တာ .. ရှေ့ ကရေကန်လေးဝင်တိုက်ပြီး ရေထဲပြုတ်ကျရော..။
အဲဒါကို ဗီဒီယိုကင်မရာထဲကကြည့်နေတဲ့ .. လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေ ၀ိုင်းဟားကြတာ..။
အဲဒီမိန်းမ .. မနေ့ကတီဗီဌာနခေါ်ပြီး .. ရှက်လို့တဲ့ ..ငိုပြတယ်..။
နောက်.. ရှော့ပင်းမောကို တရားစွဲလိုက်ရော..။
မီဒီယာရယ်..။ တရားရေးရယ်.. စံနစ်တကျအလုပ်လုပ်သွားရင်.. ကိစ္စတော်တော်များများ .. အစိုးရနဲ့မဆိုင်ပဲ.. ပြီးစီးပါတယ်..။
Woman Falls In Fountain While Texting, Sues
One minute she was texting backafriend. The next minute she was doingaface plant intoafountain full of coins. Now she wants to sue.
Cathy Cruz Marrero is questioning the professionalism of mall security workers afteravideo of her tumbling intoamall fountain while texting went viral.
The Pennsylvania woman says she both laughs and cries about her face-first flop into the fountain at the Berkshire Mall, in the town of Wyomissing.
“A friend of mine from church, she texted me and I decided to text her back,” Marrero said.
“I thought I hadalong distance — I didn’t. My boot hit the edge of the fountain and I fell over. I couldnt see anything that I could grab. Next thing I know I’m seeing pennies and coins in front of my face,” she said.
The video shows Marrero, oblivious to the looming fountain, tripping over the edge and falling into the water. She quickly gathers her bag and dropped cell phone and walks away.
Because there was no railing to protect someone from falling into the fountain her lawsuit may have some merit, lawyers say. The mall could also be in hot water over the security personnel who laughed at her rather than checking if she was ok.
Marrero has hired an attorney to look into the matter. A message left for the mall management office was not immediately returned.
Read more: http://latino.foxnews.com/latino/news/2011/01/21/woman-falls-fountain-texting/#ixzz1Bi6DHwYA
ဂျီး အဲ့ဒါမျိုးက ဒီမှာရဖို့ သိပ်နလိုတော့ပါဘူး
တာမွေကဈေးဆိုင်တွေက တကယ်ဆိုးပါတယ် ကျနော်တောင်အားတဲ့နေ့ဓာတ်ပုံရိုက်တင်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ် အာသောကဘက်တော့မရောက်မိသေးဘူး တာမွေဈေးကနေ အာသောကသွားတဲ့ဘက် ကိုတော့ စိတ်ရှုပ်မိတယ် ပလက်ဖောင်းပေါ်တင်မဟုတ်ဘူးနော် ကားလမ်းမပေါ်တွေမှာပါရောင်းကြတာလေ ခြောက်လမ်းသွားက နှစ်လမ်းသွားလောက်ပဲရှိတော့တယ် ဘေထုပ်၊ တုတ်ထိုး၊ ဖန်စီဆိုင်၊ ဆီချက်၊ အိတ်မျိုးစုံ၊ အင်္ကျီ..အို!! အစုံပလုံပဲ ပွရှုပ်နေတာပဲ အဲဒီနေရာကို ဘိန်းစားတန်းလို့လဲခေါ်တယ် နောက်မှpost တင်ပေးမယ်